फेसबुकमा कसरी ब्याक डेटमा पोस्ट गर्ने, स्टाटसको मिति कसरी परिवर्तन गर्ने ?
October 9, 2021 N88LeaveaComment on फेसबुकमा कसरी ब्याक डेटमा पोस्ट गर्ने, स्टाटसको मिति कसरी परिवर्तन गर्ने ?
फेसबुकले प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो फेसबुक पेजमा कुनै पनि पोस्टलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको मितिमा प्रकाशित गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । जसअनुसार तपाईंले आफूले विगतमा गरेको पोस्टको मिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले गर्दै गरेको नयाँ पोस्टको मिति पनि ब्याकडेटमा लैजान सक्नुहुन्छ । फेसबुक पेजको पोस्टलाई ब्याकडेटमा लैजानका लागि तपाईंले तल दिइएको उपाय अपनाउन सक्नुहुन्छ । यसअघि […]
“जनआन्दोलनकी ‘पोस्टर’ गर्ल’ बनिन् मन्त्री, म्यालपोखरीदेखि सिंहदरवारसम्म
October 9, 2021 N88LeaveaComment on “जनआन्दोलनकी ‘पोस्टर’ गर्ल’ बनिन् मन्त्री, म्यालपोखरीदेखि सिंहदरवारसम्म
‘काठमाडौं । रामकुमारी झाँक्री’ विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी’ नेता हुन् । उनले २०४७ सालमा’ अनेरास्ववियूको प्रारम्भिक कमिटी सदस्य भएर राजनीति सुरू गरेकी थिइन् ।’ ‘झाँक्री १९ औं सम्मेलनबाट’ अध्यक्षसमेत बनेकी थिइन् । दोस्रो जनआन्दोलनका’ क्रममा प्रहरी झडपमा घाइते भएको तस्बिर चर्चित बनेपछि उनलाई कतिपयले’ जनआन्दोलनकी ‘पोष्टर गर्ल’ को समेत संज्ञा दिएका थिए । त्यसले नै उनलाई […]
कांग्रेस महाधिवेशन : यसरी बन्यो प्रकाशमान–गगन गठबन्धन, मिलेर महाधिवेशनमा ‘चौका हान्ने’ दाउ
October 9, 2021 October 9, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेस महाधिवेशन : यसरी बन्यो प्रकाशमान–गगन गठबन्धन, मिलेर महाधिवेशनमा ‘चौका हान्ने’ दाउ
काठमाडाैं । फरक–फरक नीति अबलम्बन गरेका दुई पार्टीबीच एकीकरण भएर जन्मेको नेपाली कांग्रेसमा स्थापनाकालबाटै गुटहरु सक्रिय छन्। २०७२ फागुनमा सम्पन्न १३ औँ महाधिवेशनबाट भने कांग्रेसमा स्पष्ट रुपमा तीन समूह देखिएका छन्– संस्थापन समूह, पौडेल समूह र सिटौला समूह। यी तीन गुटका नेतृत्व गरिरहेका छन्– प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद […]
श्रीमान् उपसचिव, श्रीमती मन्त्री
October 9, 2021 N88LeaveaComment on श्रीमान् उपसचिव, श्रीमती मन्त्री
काठमाडाैं । चर्चित वामपन्थी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो क्याविनेट बिस्तार गर्दै आज झाक्रीलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । विंस २०३४ सालमा गुल्मीको मयाल पोखरी गाविस १ रत्नबहादुर र रनकुमारीको कोखबाट जन्मिएको झाक्री ०६५ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)को विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको पोखरा […]
बुवा स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि अमेरिकाबाट पूर्वमिस नेपाल श्रृंखलाले पठाईन् यस्तो भा’वुक सन्देश
October 9, 2021 N88LeaveaComment on बुवा स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि अमेरिकाबाट पूर्वमिस नेपाल श्रृंखलाले पठाईन् यस्तो भा’वुक सन्देश
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री वि’रोध खतिवडाकी छोरी पूर्व मिसनेपाल श्रृंखला खतिवडाले बाबुको अपार ज्ञानले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायापलट हुने बताएकी छन् । आफ्ना बुबा खतिवडा स्वाथ्यमन्त्री बनेपछि खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा खुसी ब्यक्त गर्दै आफूलाई बाबुको कामले सधै डाहा लाग्ने गरेको बताएकी छन् । हाल अमेरिकामा रहेकी उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बुबालाई बधाई दिएकी हुन्। कार्यकाल सफलताका […]
केपी ओलीले गल्ती स्वीकार्छन् भने नयाँ ढंगले सोच्न सकिन्छ – नेपाल
October 9, 2021 N88LeaveaComment on केपी ओलीले गल्ती स्वीकार्छन् भने नयाँ ढंगले सोच्न सकिन्छ – नेपाल
काभ्रे । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गल्ती स्वीकार गरेमा नयाँ ढंगले सोच्न सकिने बताउनुभएको छ । पार्टीले विजया दशमी, शुभ दिपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वको अवसरमा बनेपामा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवं जिल्ला कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन […]
प्रचण्डले दिए एमालेलाई संसद छाडेर जान चेतावनी
October 9, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डले दिए एमालेलाई संसद छाडेर जान चेतावनी
भरतपुर । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेले अनावश्यकरूपमा संसद अवरुद्ध गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले भने, ‘विरोध गर्नै नपर्ने विषयमा विरोध गरेर संसद विघटनलाई जायज पुष्टि गर्ने प्रयास गरिँदैछ । त्यो सम्भव छैन ।’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संसद चाहिँदैन भने छोडेर गए हुन्छ । हामी छँदैछौं […]
काँग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा सर्वसम्मत !
October 9, 2021 N88LeaveaComment on काँग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा सर्वसम्मत !
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले आफू अहिले मन्त्री हुनु भन्दा पार्टीको महामन्त्री हुँदा उत्तम हुने बताएका छन्। वर्तमान सरकार गठनदेखि नै मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका भएपनि अहिलेको समयको माग मन्त्री पद भन्दा पनि महामन्त्री भएर पार्टीको आमुल रुपान्तरण भएको थापाले बताए। कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदको प्रत्याशी बन्ने […]
नवरात्रीमा यी चीजहरु घर ल्याउनुहोस्, कहिल्यै हुनेछैन पैसाको अभाव
October 9, 2021 October 9, 2021 N88LeaveaComment on नवरात्रीमा यी चीजहरु घर ल्याउनुहोस्, कहिल्यै हुनेछैन पैसाको अभाव
एजेन्सी । घटस्थापना सँगै हिन्दु नेपालीहरुको महान पर्व दशैँ शुरु भएको छ । यस पर्वलाई नेपालीहरुले ठूलो चाडका रुपमा हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्छन् । हिन्दु परम्परामा नवरात्रीका रुपमा पनि लिने गरिन्छ, भारतमा पनि हिन्दुहरुले नवरात्रीलाई निकै उत्सवका रुपमा मनाउने गर्दछन् । नवरात्रीमा शक्ति स्वरुपा दुर्गा देबीको विभिन्न ९ स्वरुपको पूजा गर्ने गरिन्छ । पूजा अर्चना […]
ज्यातिष शास्त्र अनुसार यी ५ राशिको विवाह ढिलो हुने योग छ !
October 9, 2021 N88LeaveaComment on ज्यातिष शास्त्र अनुसार यी ५ राशिको विवाह ढिलो हुने योग छ !
भनिन्छ हरेक व्यक्तिले जन्मिदा नै आफ्नो भाग्य लिएर आएको हुन्छ । जीन्दगीको कहिले के हुन्छ त्यो पहिले नै निर्धारित हुन्छ । अझ विवाहको मामलामा त यस कुरालाई बढ्तै महत्व दिने गरिन्छ र विश्वास पनि गरिन्छ । अझ हिन्दु धार्मिक मान्यता राख्नेहरुले अलि बढी नै विश्वास राख्ने गर्छन् । भाग्यवादको कुराबाट तपाईँ हामी पनि अछुतो छैनौँ […]